1. အစုရှယ်ယာ TAIWAN SEMICON MAN ၏တန်ဖိုး
TAIWAN SEMICON MAN 83 177 $ +1.78 % ↑ 745.22T $2$
2. အစုရှယ်ယာ TOYOTA MOTOR CORP ၏တန်ဖိုး
TOYOTA MOTOR CORP 8 913 $ +0.99 % ↑ 615.83T $ 207 $
3. အစုရှယ်ယာ Apple Inc. ၏တန်ဖိုး
Apple Inc. 159.20 $ -2.04 % ↓ 2.63T $ 44.27M $
4. အစုရှယ်ယာ Bristol-Myers Squibb Company PFD CONV2၏တန်ဖိုး
5. အစုရှယ်ယာ Microsoft Corporation ၏တန်ဖိုး
Microsoft Corporation 299.79 $ -0.90 % ↓ 2.25T $ 51.44M $
6. အစုရှယ်ယာ Alphabet Inc. ၏တန်ဖိုး
Alphabet Inc.2579.40 $ -1.95 % ↓ 1.72T $ 1.09M $
7. အစုရှယ်ယာ U.S. Bancorp PERP PFD SER A ၏တန်ဖိုး
8. အစုရှယ်ယာ Amazon.com, Inc. ၏တန်ဖိုး
Amazon.com, Inc.2794.19 $ -0.42 % ↓ 1.43T $ 2.09M $
9. အစုရှယ်ယာ Tesla Motors, Inc. ၏တန်ဖိုး
10. အစုရှယ်ယာ Tesla, Inc. ၏တန်ဖိုး
Tesla, Inc. 829.10 $ +15.03 % ↑ 896.73B $ 11.60M $
11. အစုရှယ်ယာ Facebook, Inc. ၏တန်ဖိုး
Facebook, Inc. 294.61 $ -0.61 % ↓ 826.13B $ 15.24M $
12. အစုရှယ်ယာ BT Group plc ၏တန်ဖိုး
BT Group plc 75.22 € +0.86 % ↑ 733.50B € -
13. အစုရှယ်ယာ Berkshire Hathaway Inc. ၏တန်ဖိုး
14. အစုရှယ်ယာ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ၏တန်ဖိုး
15. အစုရှယ်ယာ Tencent Holdings Limited ၏တန်ဖိုး
Tencent Holdings Limited 59.41 $ +0.19 % ↑ 579.08B $ 30 557 $
16. အစုရှယ်ယာ NVIDIA Corporation ၏တန်ဖိုး
NVIDIA Corporation 219.44 $ +3.92 % ↑ 546.84B $ 56.07M $
17. အစုရှယ်ယာ Samsung Electronics Co., Ltd. ၏တန်ဖိုး
Samsung Electronics Co., Ltd. 1 360 € -2.86 % ↓ 472.13B € -
18. အစုရှယ်ယာ Vanguard Total Stock Market ETF ၏တန်ဖိုး
19. အစုရှယ်ယာ Visa Inc. ၏တန်ဖိုး
Visa Inc. 206.15 $ -0.14 % ↓ 451.37B $ 1.80M $
20. အစုရှယ်ယာ Johnson & Johnson ၏တန်ဖိုး
Johnson & Johnson 170.54 $ +0.35 % ↑ 449.46B $ 6.11M $
21. အစုရှယ်ယာ UnitedHealth Group Incorporated ၏တန်ဖိုး
22. အစုရှယ်ယာ JPMorgan Chase & Co. ၏တန်ဖိုး
23. အစုရှယ်ယာ SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ၏တန်ဖိုး
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1 502 $ +3.27 % ↑ 407.15B $ 11 882 $
24. အစုရှယ်ယာ SPDR S&P 500 ETF ၏တန်ဖိုး
SPDR S&P 500 ETF 431.24 $ +0.50 % ↑ 403.29B $ 12.15M $
25. အစုရှယ်ယာ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. ၏တန်ဖိုး
26. အစုရှယ်ယာ Kweichow Moutai Co., Ltd. ၏တန်ဖိုး
Kweichow Moutai Co., Ltd. 1 965 ¥ -0.51 % ↓ 2.47T ¥ 4.27M ¥
27. အစုရှယ်ယာ Walmart Inc. ၏တန်ဖိုး
Walmart Inc. 135.84 $ -0.87 % ↓ 383.96B $ 2.26M $
28. အစုရှယ်ယာ The Procter & Gamble Company ၏တန်ဖိုး
The Procter & Gamble Company 159.13 $ -0.61 % ↓ 381.45B $ 7.97M $
29. အစုရှယ်ယာ The Home Depot, Inc. ၏တန်ဖိုး
The Home Depot, Inc. 356.43 $ +0.24 % ↑ 372.63B $ 2.56M $
30. အစုရှယ်ယာ Nestlé S.A. ၏တန်ဖိုး
Nestlé S.A. 127.10 $ +0.51 % ↑ 351.51B $ 64 716 $
31. အစုရှယ်ယာ Mastercard Incorporated ၏တန်ဖိုး
32. အစုရှယ်ယာ Alibaba Group Holding Limited ၏တန်ဖိုး
Alibaba Group Holding Limited 111.79 $ -0.66 % ↓ 322.46B $ 12.11M $
33. အစုရှယ်ယာ Roche Holding AG ၏တန်ဖိုး
34. အစုရှယ်ယာ Exxon Mobil Corporation ၏တန်ဖိုး
Exxon Mobil Corporation 75.12 $ -0.40 % ↓ 319.02B $ 7.43M $
35. အစုရှယ်ယာ Raging River Exploration Inc. ၏တန်ဖိုး
Raging River Exploration Inc. 12.80 € -0.51 % ↓ 271.09B € 1 515 €
36. အစုရှယ်ယာ Pfizer Inc. ၏တန်ဖိုး
Pfizer Inc. 53.37 $ +0.49 % ↑ 299.56B $ 34.63M $
37. အစုရှယ်ယာ Bank of America Corporation PFD DP1/12004၏တန်ဖိုး
38. အစုရှယ်ယာ Bank of America Corporation ၏တန်ဖိုး
39. အစုရှယ်ယာ iShares Core S&P 500 ETF ၏တန်ဖိုး
40. အစုရှယ်ယာ Toyota Motor Corporation ၏တန်ဖိုး
Toyota Motor Corporation 189.96 $ +2.27 % ↑ 266.73B $ 39 269 $
41. အစုရှယ်ယာ ASML Holding N.V. ၏တန်ဖိုး
ASML Holding N.V. 634.66 $ +3.02 % ↑ 266.05B $ 762 249 $
42. အစုရှယ်ယာ The Coca-Cola Company ၏တန်ဖိုး
The Coca-Cola Company 59.65 $ -0.83 % ↓ 258.69B $ 14.66M $
43. အစုရှယ်ယာ Chevron Corporation ၏တန်ဖိုး
44. အစုရှယ်ယာ GLAXOSMITHKLINE ၏တန်ဖိုး
45. အစုရှယ်ယာ Industrial and Commercial Bank of China Limited ၏တန်ဖိုး
46. အစုရှယ်ယာ The Walt Disney Company ၏တန်ဖိုး
The Walt Disney Company 135.42 $ -1.33 % ↓ 246.98B $ 7.10M $
47. အစုရှယ်ယာ AbbVie Inc. ၏တန်ဖိုး
48. အစုရှယ်ယာ Adobe Systems Incorporated ၏တန်ဖိုး
Adobe Systems Incorporated 493.05 $ +1.60 % ↑ 234.81B $ 2.29M $
49. အစုရှယ်ယာ PepsiCo, Inc. ၏တန်ဖိုး
PepsiCo, Inc. 169.37 $ -1.01 % ↓ 234.18B $ 6.47M $
50. အစုရှယ်ယာ Cisco Systems, Inc. ၏တန်ဖိုး
Cisco Systems, Inc. 54.62 $ +1.32 % ↑ 229.69B $ 11.94M $
51. အစုရှယ်ယာ NIKE, Inc. ၏တန်ဖိုး
52. အစုရှယ်ယာ Broadcom Inc. ၏တန်ဖိုး
Broadcom Inc. 542.31 $ +2.81 % ↑ 226.55B $ 1.25M $
53. အစုရှယ်ယာ Eli Lilly and Company ၏တန်ဖိုး
54. အစုရှယ်ယာ Thermo Fisher Scientific Inc. ၏တန်ဖိုး
55. အစုရှယ်ယာ Comcast Corporation ၏တန်ဖိုး
56. အစုရှယ်ယာ L'Oréal S.A. ၏တန်ဖိုး
57. အစုရှယ်ယာ Abbott Laboratories ၏တန်ဖိုး
Abbott Laboratories 120.44 $ -0.31 % ↓ 220.06B $ 3.44M $
58. အစုရှယ်ယာ Novo Nordisk A/S ၏တန်ဖိုး
Novo Nordisk A/S 95.44 $ -2.39 % ↓ 219.18B $ 1.32M $
59. အစုရှယ်ယာ China Merchants Bank Co., Ltd. ၏တန်ဖိုး
60. အစုရှယ်ယာ Verizon Communications Inc. ၏တန်ဖိုး
Verizon Communications Inc. 51.19 $ -0.33 % ↓ 217.43B $ 13.18M $
61. အစုရှယ်ယာ Costco Wholesale Corporation ၏တန်ဖိုး
62. အစုရှယ်ယာ Reliance Industries Limited ၏တန်ဖိုး
Reliance Industries Limited 56.40 € -1.05 % ↓ 191.35B € 12 €
63. အစုရှယ်ယာ Oracle Corporation ၏တန်ဖိုး
Oracle Corporation 79.78 $ -0.24 % ↓ 213.05B $ 10.15M $
64. အစုရှယ်ယာ Accenture plc ၏တန်ဖိုး
Accenture plc 333.36 $ -1.31 % ↓ 212.11B $ 1.15M $
65. အစုရှယ်ယာ salesforce.com, inc. ၏တန်ဖိုး
66. အစုရှယ်ယာ Merck & Co., Inc. ၏တန်ဖိုး
67. အစုရှယ်ယာ Wells Fargo & Company ၏တန်ဖိုး
68. အစုရှယ်ယာ NOVARTIS AG ၏တန်ဖိုး
69. အစုရှယ်ယာ Intel Corporation ၏တန်ဖိုး
Intel Corporation 48.05 $ -3.36 % ↓ 196.23B $ 74.05M $
70. အစုရှယ်ယာ Royal Dutch Shell plc ၏တန်ဖိုး
Royal Dutch Shell plc 25.50 $ +0.47 % ↑ 194.66B $5538 $
71. အစုရှယ်ယာ Danaher Corporation ၏တန်ဖိုး
72. အစုရှယ်ယာ Novartis AG ၏တန်ဖိုး
Novartis AG 85.14 $ -1.05 % ↓ 192.44B $ 2.98M $
73. အစုရှယ်ယာ China Construction Bank Corporation ၏တန်ဖိုး
74. အစုရှယ်ယာ McDonald's Corporation ၏တန်ဖိုး
75. အစုရှယ်ယာ PayPal Holdings, Inc. ၏တန်ဖိုး
PayPal Holdings, Inc. 158.11 $ -0.71 % ↓ 185.77B $ 12.16M $
76. အစုရှယ်ယာ AstraZeneca PLC ၏တန်ဖိုး
77. အစုရှယ်ယာ Tata Consultancy Services Limited ၏တန်ဖိုး
Tata Consultancy Services Limited3710 Rs -1.59 % ↓ 13.70T Rs 222 845 Rs
78. အစုရှယ်ယာ QUALCOMM Incorporated ၏တန်ဖိုး
QUALCOMM Incorporated 161.20 $ +3.73 % ↑ 181.36B $ 10.70M $
79. အစုရှယ်ယာ Vanguard Small-Cap ETF ၏တန်ဖိုး
80. အစုရှယ်ယာ United Parcel Service, Inc. ၏တန်ဖိုး
81. အစုရှယ်ယာ AT&T Inc. ၏တန်ဖိုး
AT&T Inc. 24.11 $ +0.062 % ↑ 173.03B $ 18.35M $
82. အစုရှယ်ယာ Netflix, Inc. ၏တန်ဖိုး
Netflix, Inc. 386.39 $ -0.16 % ↓ 171.29B $ 23.99M $
83. အစုရှယ်ယာ The Charles Schwab Corporation ၏တန်ဖိုး
The Charles Schwab Corporation 89.70 $ +0.35 % ↑ 169.59B $ 10.89M $
84. အစုရှယ်ယာ BHP Billiton plc ၏တန်ဖိုး
85. အစုရှယ်ယာ Texas Instruments Incorporated ၏တန်ဖိုး
Texas Instruments Incorporated 174.81 $ +2.06 % ↑ 165.78B $ 975 189 $
86. အစုရှယ်ယာ Noranda Income Fund ၏တန်ဖိုး
87. အစုရှယ်ယာ BHP Billiton Limited ၏တန်ဖိုး
88. အစုရှယ်ယာ RBC FIRST PREF SH SERIES AZ ၏တန်ဖိုး
89. အစုရှယ်ယာ Agricultural Bank of China Limited ၏တန်ဖိုး
90. အစုရှယ်ယာ Linde plc ၏တန်ဖိုး
91. အစုရှယ်ယာ Union Pacific Corporation ၏တန်ဖိုး
92. အစုရှယ်ယာ Philip Morris International Inc. ၏တန်ဖိုး
Philip Morris International Inc. 102.25 $ -0.84 % ↓ 159.19B $ 6.31M $
93. အစုရှယ်ယာ Linde Aktiengesellschaft ၏တန်ဖိုး
Linde Aktiengesellschaft 280.90 € -0.30 % ↓ 141.97B € 281 708 €
94. အစုရှယ်ယာ AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 ၏တန်ဖိုး
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 25.36 $ +0.28 % ↑ 156.38B $3077 $
95. အစုရှယ်ယာ TOTAL S.A. ၏တန်ဖိုး
96. အစုရှယ်ယာ ROYAL BANK PREF SERIES BF ၏တန်ဖိုး
97. အစုရှယ်ယာ Lowe's Companies, Inc. ၏တန်ဖိုး
98. အစုရှယ်ယာ ROYAL BANK PREF SERIES BD ၏တန်ဖိုး
99. အစုရှယ်ယာ Intuit Inc. ၏တန်ဖိုး
100. အစုရှယ်ယာ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ၏တန်ဖိုး
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 15.78 $ +2.40 % ↑ 145.56B $ 296 127 $
101. အစုရှယ်ယာ The Toronto-Dominion Bank ၏တန်ဖိုး
The Toronto-Dominion Bank 78.95 $ +0.13 % ↑ 145.28B $ 247 942 $
102. အစုရှယ်ယာ Hermès International Société en commandite par actions ၏တန်ဖိုး
103. အစုရှယ်ယာ HSBC Holdings plc ၏တန်ဖိုး
104. အစုရှယ်ယာ SAP SE ၏တန်ဖိုး
SAP SE 122.38 $ +8.80 % ↑ 144.36B $ 2.15M $
105. အစုရှယ်ယာ NextEra Energy, Inc. ၏တန်ဖိုး
106. အစုရှယ်ယာ Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSA UBD Units ၏တန်ဖိုး
107. အစုရှယ်ယာ Bristol-Myers Squibb Company ၏တန်ဖိုး
108. အစုရှယ်ယာ CVS Health Corporation ၏တန်ဖိုး
109. အစုရှယ်ယာ PetroChina Company Limited ၏တန်ဖိုး
110. အစုရှယ်ယာ China Mobile Limited ၏တန်ဖိုး
China Mobile Limited 5.86 € +0.58 % ↑ 124.65B €2750 €
111. အစုရှယ်ယာ Medtronic plc ၏တန်ဖိုး
112. အစုရှယ်ယာ Honeywell International Inc. ၏တန်ဖိုး
113. အစုရှယ်ယာ Bank of China Limited ၏တန်ဖိုး
114. အစုရှယ်ယာ Invesco QQQ Trust ၏တန်ဖိုး
Invesco QQQ Trust 341.10 $ +1.03 % ↑ 134.09B $ 90.41M $
115. အစုရှယ်ယာ T-Mobile US, Inc. ၏တန်ဖိုး
116. အစုရှယ်ယာ Christian Dior SE ၏တန်ဖိုး
117. အစုရှယ်ယာ Unilever N.V. ၏တန်ဖိုး
118. အစုရှယ်ယာ Unilever PLC ၏တန်ဖိုး
119. အစုရှယ်ယာ Volkswagen AG ၏တန်ဖိုး
Volkswagen AG 284.25 $ +0.19 % ↑ 132.17B $ 16 $
120. အစုရှယ်ယာ AIA Group Limited ၏တန်ဖိုး
121. အစုရှယ်ယာ American Express Company ၏တန်ဖိုး
122. အစုရှယ်ယာ Sanofi ၏တန်ဖိုး
123. အစုရှယ်ယာ Sony Corporation ၏တန်ဖိုး
Sony Corporation 103.64 $ +0.74 % ↑ 128.46B $ 44 552 $
124. အစုရှယ်ယာ Citigroup Inc. ၏တန်ဖိုး
Citigroup Inc. 64.15 $ -2.20 % ↓ 127.63B $ 11.47M $
125. အစုရှယ်ယာ Amgen Inc. ၏တန်ဖိုး
126. အစုရှယ်ယာ Advanced Micro Devices, Inc. ၏တန်ဖိုး
Advanced Micro Devices, Inc. 102.60 $ -8.55 % ↓ 126.06B $ 70.78M $
127. အစုရှယ်ယာ Siemens Aktiengesellschaft ၏တန်ဖိုး
Siemens Aktiengesellschaft 156.40 $ +1.85 % ↑ 125.80B $ 626 $
128. အစုရှယ်ယာ HDFC Bank Limited ၏တန်ဖိုး
129. အစုရှယ်ယာ Keyence Corporation ၏တန်ဖိုး
130. အစုရှယ်ယာ BlackRock, Inc. ၏တန်ဖိုး
BlackRock, Inc. 787.96 $ -2.45 % ↓ 120.22B $ 253 991 $
131. အစုရှယ်ယာ NATIONAL GRID ၏တန်ဖိုး
132. အစုရှယ်ယာ International Business Machines Corporation ၏တန်ဖိုး
International Business Machines Corporation 132.52 $ +1.33 % ↑ 118.89B $ 3.84M $
133. အစုရှယ်ယာ Rio Tinto Limited ၏တန်ဖိုး
134. အစုရှယ်ယာ Rio Tinto plc ၏တန်ဖိုး
Rio Tinto plc 74.93 $ +0.99 % ↑ 117.69B $ 1 440 $
135. အစုရှယ်ယာ ConocoPhillips ၏တန်ဖိုး
136. အစုရှယ်ယာ Diageo plc ၏တန်ဖိုး
137. အစုရှယ်ယာ Applied Materials, Inc. ၏တန်ဖိုး
138. အစုရှယ်ယာ Deere & Company ၏တန်ဖိုး
139. အစုရှယ်ယာ Caterpillar Inc. ၏တန်ဖိုး
Caterpillar Inc. 212.26 $ -1.97 % ↓ 114.78B $ 1.65M $
140. အစုရှယ်ယာ KCE Electronics Public Company Limited ၏တန်ဖိုး
KCE Electronics Public Company Limited 72.75 ฿ +3.19 % ↑ 3.80T ฿ 6.21M ฿
141. အစုရှယ်ယာ Commonwealth Bank of Australia ၏တန်ဖိုး
142. အစုရှယ်ယာ The Goldman Sachs Group, Inc. ၏တန်ဖိုး
143. အစုရှယ်ယာ The Boeing Company ၏တန်ဖိုး
144. အစုရှယ်ယာ Anheuser-Busch InBev SA/NV ၏တန်ဖိုး
Anheuser-Busch InBev SA/NV 63.79 $ -0.33 % ↓ 112.12B $ 680 869 $
145. အစုရှယ်ယာ Starbucks Corporation ၏တန်ဖိုး
Starbucks Corporation 95.32 $ +0.27 % ↑ 111.83B $ 7.29M $
146. အစုရှယ်ယာ GlaxoSmithKline plc ၏တန်ဖိုး
147. အစုရှယ်ယာ Shopify Inc. ၏တန်ဖိုး
Shopify Inc. 815.76 $ +6.97 % ↑ 111.34B $ 48 631 $
148. အစုရှယ်ယာ HONDA MOTOR CO ၏တန်ဖိုး
149. အစုရှယ်ယာ CP ALL Public Company Limited ၏တန်ဖိုး
CP ALL Public Company Limited 59 ฿ +1.29 % ↑ 3.69T ฿ 38.28M ฿
150. အစုရှယ်ယာ Prologis, Inc. ၏တန်ဖိုး
Prologis, Inc. 148.61 $ +2.14 % ↑ 109.87B $ 3.98M $
151. အစုရှယ်ယာ American Tower Corporation (REIT) ၏တန်ဖိုး
152. အစုရှယ်ယာ ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR ၏တန်ဖိုး
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 57.20 € -1.04 % ↓ 97.62B € 460 €
153. အစုရှယ်ယာ The Estée Lauder Companies Inc. ၏တန်ဖိုး
154. အစုရှယ်ယာ BP PLC ADR/6 DL -,25 ၏တန်ဖိုး
BP PLC ADR/6 DL -,25 28.60 € -2.05 % ↓ 95.83B € 800 €
155. အစုရှယ်ယာ Anthem, Inc. ၏တန်ဖိုး
156. အစုရှယ်ယာ Lockheed Martin Corporation ၏တန်ဖိုး
157. အစုရှယ်ယာ ServiceNow, Inc. ၏တန်ဖိုး
ServiceNow, Inc. 528.69 $ -7.73 % ↓ 105.21B $ 5.47M $
158. အစုရှယ်ယာ Allianz SE ၏တန်ဖိုး
159. အစုရှယ်ယာ Target Corporation ၏တန်ဖိုး
Target Corporation 212.18 $ -0.22 % ↓ 103.63B $ 445 380 $
160. အစုရှယ်ယာ JD.com, Inc. ၏တန်ဖိုး
161. အစုရှယ်ယာ ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIE ၏တန်ဖိုး
162. အစုရှယ်ယာ China Life Insurance Company Limited ၏တန်ဖိုး
163. အစုရှယ်ယာ BP p.l.c. ၏တန်ဖိုး
164. အစုရှယ်ယာ Charter Communications, Inc. ၏တန်ဖိုး
165. အစုရှယ်ယာ Gazprom ၏တန်ဖိုး
Gazprom 8.27 $ -0.48 % ↓ 99.93B $ 1.10M $
166. အစုရှယ်ယာ Airbus SE ၏တန်ဖိုး
167. အစုရှယ်ယာ Booking Holdings Inc. ၏တန်ဖိုး
168. အစုရှယ်ယာ General Electric Company ၏တန်ဖိုး
General Electric Company 89.90 $ -0.64 % ↓ 98.92B $ 4.90M $
169. အစုရှယ်ယာ Transurban Group Stapled Securities ၏တန်ဖိုး
170. အစုရှယ်ယာ Gazprom Level 1 Ads ၏တန်ဖိုး
Gazprom Level 1 Ads 8.40 $ -8.81 % ↓ 98.57B $ 10.10M $
171. အစုရှယ်ယာ Royal Bank of Canada ၏တန်ဖိုး
172. အစုရှယ်ယာ Macquarie Group Limited ၏တန်ဖိုး
173. အစုရှယ်ယာ S&P Global Inc. ၏တန်ဖိုး
S&P Global Inc. 395.08 $ +0.63 % ↑ 97.87B $ 51 380 $
174. အစုရှယ်ယာ Nippon Telegraph and Telephone Corporation ၏တန်ဖိုး
175. အစုရှယ်ယာ British American Tobacco p.l.c. ၏တန်ဖိုး
176. အစုရှယ်ယာ 3M Company ၏တန်ဖိုး
177. အစုရှယ်ယာ ENBRIDGE INC PREF SER P ၏တန်ဖိုး
178. အစုရှယ်ယာ ENBRIDGE INC PREF SER7၏တန်ဖိုး
179. အစုရှယ်ယာ Stryker Corporation ၏တန်ဖိုး
Stryker Corporation 245.33 $ +1.21 % ↑ 94.48B $ 142 908 $
180. အစုရှယ်ယာ Schneider Electric S.E. ၏တန်ဖိုး
Schneider Electric S.E. 168.33 $ +1.32 % ↑ 94.19B $2465 $
181. အစုရှယ်ယာ Mondelez International, Inc. ၏တန်ဖိုး
182. အစုရှယ်ယာ Intuitive Surgical, Inc. ၏တန်ဖိုး
183. အစုရှယ်ယာ Industria de Diseño Textil, S.A. ၏တန်ဖိုး
184. အစုရှယ်ယာ Infosys Limited ၏တန်ဖိုး
185. အစုရှယ်ယာ INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 ၏တန်ဖိုး
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 19.70 € +2.60 % ↑ 83.68B € 950 €
186. အစုရှယ်ယာ Altria Group, Inc. ၏တန်ဖိုး
187. အစုရှယ်ယာ BBVA(BILB-VIZ-ARG) ၏တန်ဖိုး
188. အစုရှယ်ယာ Deutsche Telekom AG ၏တန်ဖိုး
189. အစုရှယ်ယာ Zoetis Inc. ၏တန်ဖိုး
190. အစုရှယ်ယာ Equinor ASA ၏တန်ဖိုး
191. အစုရှယ်ယာ BYD Company Limited ၏တန်ဖိုး
BYD Company Limited 30.80 $ +1.40 % ↑ 89.63B $ 36 409 $
192. အစုရှယ်ယာ MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien ၏တန်ဖိုး
193. အစုရှယ်ယာ Kering SA ၏တန်ဖိုး
Kering SA 715.08 $ +6.23 % ↑ 88.72B $ 495 $
194. အစုရှယ်ယာ ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J ၏တန်ဖိုး
195. အစုရှယ်ယာ Micron Technology, Inc. ၏တန်ဖိုး
196. အစုရှယ်ယာ BCO BRADESCO SA ၏တန်ဖိုး
197. အစုရှယ်ယာ BNP Paribas SA ၏တန်ဖိုး
198. အစုရှယ်ယာ The Bank of Nova Scotia ၏တန်ဖိုး
199. အစုရှယ်ယာ U.S. Bancorp ၏တန်ဖိုး
200. အစုရှယ်ယာ The PNC Financial Services Group, Inc. ၏တန်ဖိုး
The PNC Financial Services Group, Inc. 204.96 $ +0.51 % ↑ 86.08B $ 1.63M $
အွန်လိုင်း mode ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၏စတော့စျေးနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site allstockstoday.com ၏ဤအပိုင်းကိုပြသသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏တန်ဖိုးကိုဆန်းစစ်သည်။
အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ - ကမ္ဘာပေါ်ရှိအိတ်ချိန်းအားလုံးမှစုပေါင်းတန်ဖိုး။ စတော့အိတ်ချိန်းသည်မတူညီသောအချိန်များတွင်မတူညီသောလဲလှယ်မှုများတွင်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည်အဓိကရောင်းဝယ်မှုများတွင်စတော့ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးကိုခြေရာခံပြီးကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေးနှုန်း၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကိုကောက်ယူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများရရှိနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများသည်ဖလှယ်မှုရှိစတော့အိတ်ချိန်းများတွင်စာရင်းပြုစုထားသည်။ စတော့အိတ်ချိန်းဇယား၏အတန်းတစ်ခုစီသည်ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိစတော့စျေးနှုန်းကိုပြသည်။
အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုတစ်ခုစီတွင်အစုရှယ်ယာများတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုးကားချက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများကိုကောက်ယူစုဆောင်းပြီးစားပွဲတစ်ခုသို့ယူဆောင်လာသည်။
အချိန်နှင့်အမျှကမ္ဘာ့လဲလှယ်မှုများတွင်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏စတော့စျေးနှုန်းမှာဖလှယ်မှုအပေါ်အရောင်းအဝယ်ပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားပြီးချက်ချင်းပင်လဲလှယ်မှုအားလုံးမှကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုး၏အကျဉ်းချုပ်ဇယားထဲသို့ကျသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလဲလှယ်မှုများမှစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများကိုဤသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။